eNasha.com - सुँगुरको पाठोलाई काख
सुँगुरको पाठोलाई काख
कहिलेकाहीँ प्रकृतिले पनि अचम्मै गर्छ । त्यो कसरी भने, चीनमा एउटा कुकुरले सुँगुरको पाठोलाई काख लिएर ! सामान्यतया पशुले समेत अर्काका बच्चालाई छेउमा आउन दिँदैनन् । तर यो कुकुरले छेउमा आउनु मात्र होइन, उसलाई भोक लागेको बेला आफ्ना छाउरालाई झैँ दूध चुसाउने, चाट्ने र माया गर्ने गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
चोङकिङ शहरकी हुइहु नामक यो कुकुर्नीले सुँगुरको पाठोलाई अपनाएकी हो । त्यसो त हुइहुले केही समयअघि आफ्ना पाँच सन्तान गुमाएकी थिई । उसको गर्भ तुहिएपछि उसलाई सन्तानको मोहले ज्यादै सताएकोले हुनसक्छ, सुँगुरको पाठोलाई आफ्नो माया खन्याएकी !
"आफ्ना सन्तान जन्मदै मरेको पाएपछि एक सातासम्म उसको अनुहारमा कान्ति थिएन । एक रात हामीले देख्यौँ, एउटा कालो सुँगुरको पाठो उसलाई पछ्याउँदै आएको हामीले देख्यौँ", कुकर्ुर्नीका मालिक लाओ यीको भनाइलाई चोङकिङ बिजनेस पेपरले लेखेको छ ।
हुइहुले त्यो पाठोलाई आफ्नै सन्तानझैँ माया गर्ने, दूध चुसाउने र आफू जता गयो उतै लैजाने समेत गरेकी छे । यो देखेर लाओ यीका छिमेकी समेत दङ्ग परेका छन् । कतिसम्म भने यी दुइको जोडी अहिले चर्चाका वृत्तमा छन् भने सेलिब्रिटी बनेका छन् । यो देखेर वरपरका शहरबाट दर्शनार्थीहरुको घुइँचो लाग्न थालेको छ ।
पाँच छाउरा मरेर तिनको भाग्यमा रजाइँ गरिरहेको त्यो सुँगुरको पाठो एक महिनामै हलक्क बढेर दुइ केजी बढी तौल बढाएको छ । पाठोले कुकुरको दूधबाहेक अन्य कुनै खाद्य पदार्थ नखाएको हुइहुका मालिकले बताएका छन् ।
जनावर माया सुन्दरी सेलेब्रिटी गुगल विज्ञापन बलिउड भव्यता इन्टरनेट नग्नता फट्याइँ श्रीमानश्रीमती मूर्ख्याइँ उपाय उदेकलाग्दो परिस्थिति हलिउड मुद्दा मामिला कीर्तिमान उदारता